waa maxay doorka maamule qa?
Ugu Weyn Ee Qa Waa maxay Doorka Maamulaha QA?
Waa maxay Doorka Maamulaha QA?
Maamulayaasha QA waxay door muhiim ah ka ciyaaraan guusha ganacsiga iyagoo hubinaya in alaabada softiweerku ay buuxiso filashooyinka isticmaalaha. Waxay qorsheeyaan iskuna dubbaridaan kooxaha QA si ay u sameeyaan qaabab lagu xakameeyo tayada ururka. Waxay sidoo kale ka shaqeeyaan hagaajinta hufnaanta urur iyo faa'iidada. Si kastaba ha noqotee, maaddaama shirkaduhu u wareegaan bey'ado deg-deg ah, maareeyayaasha QA waxay la kulmaan jahwareer.
Waxay ku adkaatay maareeyayaasha inay fahmaan kaalintooda marka aan lagu qeexin urur dhaqaaqo leh. Xirfadlayaashani waxay yaqaanaan shaqooyinkooda iyo waajibaadkooda jawi biyo-dhac dhaqameed.
Maamulayaasha QA waxay ku fiicnaan karaan iyagoo fahmaya sida saxda ah ee loo baahan yahay maaddaama ay la tacaalayaan mashaariicda degdegga ah.
Doorka Maareeyaha QA
Aan aragno sida maareeyaha QA uu door wax ku ool ah uga ciyaari karo hubinta tayada:
Marka ururku u dhaqaaqo habraaca agile, kooxda hormarinta ayaa hogaamisa iyo tijaabiyeyaasha kooxaha dhexdooda ah waxay u maleynayaan inay maareeyaan tayada.
Marka koox mas'uul ka tahay tayada oo waxqabadkooda lagu cabiro tayada koodhka, waxay u muuqdaan inay keenaan koodh tayo sare leh. Tayada waxay noqoneysaa qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshayaashooda, horumarintooda iyo hababka tijaabinta. Tayada lambarka ee lagu aasaasay natiijooyinka la qiyaasi karo waxay bartilmaameed u noqotaa dhammaan kooxda QA ee ka caawisa iyaga inay keenaan lambar wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxaa jira dhinac xun oo tan ah. Waxay qaadataa waqti iyo dadaal badan urur inuu udhaqaaqo dhaqamada dhaqaaqa, kahor intaan tayada noqonin geeskooda tartanka.
Soosaarayaasha iyo tijaabiyayaashu waxay ku qalabaysan yihiin xirfado farsamo oo aad u sareeya waxayna sidoo kale diirada saaraan dhinacyada farsamada ee QA, sida otomaatiga imtixaanka iyo qalabka. Badanaa waa laga jari karaa dhinacyada maamulka oo ay ku jiraan koodhka, is-dhexgalka iyo la shaqeynta macaamiisha.
QA waa xirfad ee maahan oo kaliya wax uu qofku qaban karo inta uu soo saarayo qalabka softiweer. Waxay u baahan yihiin inay yeeshaan taariikh sax ah oo ay la socdaan wixii ugu dambeeyay qalabka maaraynta imtixaanka , tiknoolajiyada, iyo isbeddellada.
In kasta oo kooxaha agile la siiyay madax-bannaani iyo mas'uuliyad ay ku maareeyaan shaqooyinkooda, ururku guud ahaan waa inuu weli u shaqeeyaa sidii hal unug.
Maareeyayaasha QA waa inay dejiyaan xeerar aasaasi ah sida waxyaabaha aaladda baaritaanka ay tahay in la isticmaalo, hababka ay tahay inay adeegsadaan, sida loo qeexo xaaladda cilladda, iwm.
Maamulayaasha QA sidoo kale waa inay si dhow ula shaqeeyaan maamulayaasha R&D si loo qeexo heerarka, maadaama ay go'aaminayaan sida hababka loogu soo bandhigo kooxaha, sida loo tababaray iyo sida horumarkooda loo maareeyo si loo ilaaliyo tayada safka hore inta lagu jiro geedi socodka horumarka.
Tilmaamahani waxay ka caawinayaan maareeyayaasha R&D sidii ay uga dhex hirgelin lahaayeen howlaha QA kooxdooda dhexdooda isla markaana ay ugu sii dhiirigelin lahaayeen jihaynta jihada saxda ah.
Koox kasta oo horumarineed waxay leedahay horumariyeyaal leh aaggooda khibrad u leh. Hal koox horumarineed ayaa laga yaabaa inay ka shaqeeyaan UI, halka kuwa kale ay diiradda saaraan adeegyada dhamaadka-dhamaadka ee dalabka.
Horumariyayaashu waxay u baahan yihiin noocyo kala duwan oo aqoon gaar ah u leh mashaariic horumarineed oo kala duwan, sida buugga iyo imtixaanka otomaatiga ah . Si kastaba ha noqotee, otomaatiga tijaabada ah wuu ka duwanaan karaa, iyadoo kuxiran haddii laga shaqeynayo UI, REST API, iwm.
Maamulaha QA wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa sidii koox xikmad leh loo dhisi lahaa, tirada saxda ah ee horumariyayaasha, injineerada tijaabada iyo khubarada QA. Waxay qeexayaan doorarkooda iyo masuuliyadahooda waxayna sidoo kale hubiyaan in tijaabiyeyaashu ay ku qalabeysan yihiin aaladaha maareynta imtixaanka saxda ah si loo gaaro mashaariic guuleysta.
Xulashada taxaddar leh ee Heerarka Tayada
Kahor qiimeynta tayada alaabooyinka, waa qasab in la sameeyo baareyaasha cabbiraadda ay u adeegsan doonaan cabirkooda. Maamulaha QA waa inuu ka caawiyaa kooxaha horumarinta qeexida qiyaastooda tayada leh.
Tusaale ahaan, sida loo kala saaro cilladaha? Sidee loo qeexaa waxtarka? Waa maxay saamiga dib u noqoshada? Maxaa dib u dhaca keenay? Iyo inbadan.
Maareeye ayaa sidoo kale indha indheeya isbeddellada xagga qiyaasta ee dhammaan kooxaha ka jira urur. Tani kaliya ma xaqiijinayso tayada koodhka guud ahaan laakiin sidoo kale waxay ka caawineysaa iyaga inay aqoonsadaan kooxaha laga yaabo inaysan si hufan u shaqeynin.
Waxaa jira sababo dhowr ah oo ku saabsan sababta ay kooxihu u liitaan. Waxaa laga yaabaa inaysan raacin hababka baaritaanka saxda ah, ama tayada koodhka bilowga ah uusan fiicnaan karin, taas oo keeneysa in cilado sii kordhaya.
Intaa waxaa dheer, sababtoo ah caymiska ku filnaanta ee imtixaannada otomaatigga ah ayaa laga yaabaa inay dhacdo cilado dib u dhac ah. Sabab kastoo ay doonto ha noqotee, waa shaqada maareeyaha QA inuu aqoonsado arrinta isla markaana hubiyo in kooxuhu ay qabtaan shaqooyinka ugu wanaagsan.
Ka shaqee Tayada Guud
Caadi ahaan, kooxaha horumarintu waxay horumariyaan, tijaabiyaan oo ay ku gudbiyaan sheekooyinka isticmaaleyaasha gudaha degmooyinkooda, halka khubarada QA ay ku xiran tahay inay sameeyaan baaritaan iskudhaf ah si loo hubiyo in wax waliba si wanaagsan u wada shaqeeyaan.
Waxay ujeedadoodu tahay inay tijaabiyaan isdhexgalka ka dhexeeya qaybaha kala duwan ee jawiyada kala duwan si loo hubiyo inay nidaamkoodu shaqeynayaan iyada oo aan wax isdhexgal ah, waxqabad ama nabadgelyo ah.
Maamulaha QA ayaa door muhiim ah ka ciyaara hubinta tayada nidaamka guud.
Markay aqoonsadaan dhibaatooyinka xagga nidaamka, waxay u baahan yihiin inay u dhaqmaan sidii buundo u dhexeysa kuwa horumariya, naqshadaha QA iyo tijaabiyaasha.
Maaddaama ay talo ka helayaan dhammaan kooxahan, waxay si gaar ah ugu habboon yihiin inay eegaan xaaladda guud ee dalabka oo ay aqoonsadaan caqabadaha jira si ay u qaadaan tallaabooyin waqtigooda ku habboon.
Garaacista Miisaanka Saxda ah
Maamulaha QA wuxuu ku dadaalaa isku dheelitirka dalabyada imtixaanka ee kooxdooda gudaha. Haddii ay jirto baahi loo qabo wareegyada tijaabada ee dheeraadka ah, hoggaanka kooxda horumarinta ayaa u qoondeyn kara tijaabiyeyaal dheeri ah kooxda.
Maamulayaasha QA waxay u wareejin karaan horumariyeyaasha ama tijaabiyeyaasha kooxaha dhexdooda si ay wax uga qabtaan baahida saacadda ee baaritaanka.
Maamulaha QA wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa urur dhaqaaqaya, wuxuuna ubaahanyahay inuu yeesho aragti iyo istiraatiijiyad. Waa inay ka sii horreeyaan isbeddelada cusub ee QA domainka, qiimeeyaan aaladaha maareynta imtixaanka cusub iyo inay bartaan farsamooyin cusub.
Maamulaha QA waa inuu sidoo kale ka dhex hirgaliyaa howlaha QA kooxda dhexdeeda isla markaana uu ku hagaajiyaa isagoo qeexaya waxqabadyada, dejinaya mudnaanta iyo isku dheelitirka kheyraadkooda heer kooxeed. Tani waxay u oggolaaneysaa dhammaan kooxaha ururku inay wada shaqeeyaan oo ay si joogto ah u soo saaraan barnaamijyada ugu tayada sarreeya ee barnaamijyada software-ka.
Agile iyo Maareeyaha QA Doorka
Madaxa QA - Doorarka iyo Mas'uuliyadaha
12 Astaamaha hogaamiyaha dhaq dhaqaaqa wanaagsan
qalabka maaraynta imtixaanka il furan
nooca kororka ah ee horumarinta softiweerku waa
Xarig Python - Guudmarka Hawlgallada Xarigga Aasaasiga ah
Java 8 Streams Tutorial Iyadoo Tusaalooyin Koodh ah
Embold - Madal Falanqaynta Barnaamijka ku saleysan AI
Qarsoodiga, Daacadnimada iyo Helitaanka
Xeerarka Xaaladda HTTP oo leh Sharaxaad
Java - Sida Loogu Beddelo String Tusaalooyin
10ka Buug ee Selenium WebDriver
Terminologies iyo Qeexitaannada Agile
Qaabka Qorshaha Tijaabada Waxqabadka